‘मनीप्लान्ट’ घरमा लगाउँदैहुनुहुन्छ ? होशियार ! कतै यस्ता गल्ती त गर्दैहुनुहुन्न ?
एजेन्सी । हामी प्राय जसो हामी घर सजाउनको लागी घरको भित्तामा मनि प्लान्ट वा अन्य लहरे फुल जस्ता विरुवाहरु राख्ने गर्दछौ । तर वास्तु शास्त्र अनुसार यसो गर्दा मानिसहरुका शत्रुहरु बढ्ने गर्दछन् ।